Kamerona: ny fahabangan'ny tetibola widened hatramin'ny arivo tapitrisa 662 FCFA ho Septambra 2018 - Teles fampitàna
HOME » TOEKARENA »Kamerona: ny tsy fahampian'ny vola miditra amin'ny 662 miliara FCFA amin'ny faran'ny volana septambra 2018
Kamerona: ny tsy fahatomombanan'ny teti-bola nampiakatra ny fe-potoan'ny 662 miliara FCFA tamin'ny faran'ny volana septambra 2018
TELES RELAY Janoary 11 2019
(Investing any Cameroun) - Tetibola fampiharana Kamerona navoakan'ny Ministeran'ny bola (Minfi), dia mampiseho fa ny sivy volana voalohany tamin'ny taona 2018, taratry vola miditra sy Grants nihetsiketsika, ary novonoina ny fandaniana, ny fifandanjana fanabeazana fototra no misy -318,4 lavitrisa FCFA. Ny menaka tsy mandanjalanja ny Kilonga, mandritra izany, nitsangana teo amin'ny FCFA 662 miliara.
Ity fahabangan'ny tetibola vao mainka niharatsy noho ny any amin'ny faran'ny Jona 2018, dia 601,2 lavitrisa FCFA. Ny salan'isa voalohany dia tamin'ity fe-potoana ity-FCNUMX miliara FCFA. Ny salan'isan'ny solika tsy-solika dia -190,5 miliara FCFA.
Toy ny tamin'ny lafiny voalohany 2018 ny Minfi manondro fa mba hahazoana antoka tsara fampiharana ny tetibolam-panjakana sy ny tanjona amin'ny taona eo ambanin'ny famerenana, amin'ny ara-toekarena, ara-tsosialy sy ny toe-javatra somary sarotra tetibola toerana Ny fepetra noraisina hatramin'ny nanombohan'ny vanim-potoana faharoa tamin'ny taona dia nitohy.
Ny fepetra noraisin'ny governemanta mba hampihena ny fahabangan'ny tetibola dia ahitana ny hatsarana ho an'ny fanentanana amin'ny tsy-menaka vola miditra, hetra matahotra ianao fitsipika sy ny fanaraha-maso tsara kokoa ny fahombiazan'ny fandaniam-bahoaka.
Mila ny mpianatra Afrikana i Jeux - JeuneAfrique.com
MoviePass dia nanao zavatra tsy misy dikany firy tao amin'ny 2018 ka nahatonga ny 60% ny mpampiasa nanaisotra ny dokam-barotra - BGR